Dhedo iyo AlShabaab: “Cafis baad Tihiin wixii Dadka iyo Dalka aad u Gaysateen Intaas ha Idin kaga Ekaato!” – Radio Daljir
Juunyo 22, 2017 2:28 b 0
Guddoomiyaha Gobolka Bari, Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo, wuxuu shalay soo bandhigay rag isugu jira Al-Shabaab iyo Daacish. Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in raggaan uu aqoon dheer u leeyahay, wax u kala qarsoonna aysan jirin, sidaas darteed “ay cafis ka yihiin wax walba, waxa ay dileen, waxa ay kharibeen, iyo wax walba oo ay bi’iyeen.”
Madasha cafiska laguma casumin, Guddoomiye Dhedo asna kama uusan magaacin, ehelada dadkii Alshabaab ay laayeen iyo agoontii, ayna ugu danbeeyen askartii Af Urur, ama kuwo si gooni ah loogu bartilmaamaystay magaalooyinka Puntland, siiba magaalada Gaalkacyo iyo Bossaso.
Sidoo kale, Guddoomiyuhu ma uusan shaacin qodobada sharciga ah ee loo adeegsaday cafiska maxaabiista Alshaab/Daacish.
Hoos kaga bogo maqal iyo muuqaal kulankii cafiksa ee shalay ka dhacay Bossaso
Muuqaal (maqalka iyo codadka maamulka hoos kaga bogo)
Camay: Aaway Maxaabiistii Al-Shabaabka ee aan Federaalka iyo Hay’adda Elman ku Wareejinay?